ICC suspends Zimbabwe Cricket with immediate effect for political interference
Zimbabwe cricket team has been suspended from the ICC with immediate effect violation of the global body's constitution which doesn't allow any government intervention.
After meeting on Thursday, the Board unanimously decided that Zimbabwe Cricket was in breach of Article 2.4 (c) and (d) of the ICC Constitution and that the actions of the Sports and Recreation Commission in suspending the board in June constituted government interference in Zimbabwe Cricket's affairs.
Zimbabwe cricket team will be barred from participating at ICC events
"Zimbabwe Cricket has been suspended with immediate effect. The ICC Board unanimously decided that Zimbabwe Cricket, an ICC Full Member, is in breach of Article 2.4 (c) and (d) of the ICC Constitution which imposes an obligation on Members to provide a process for free and democratic elections and to ensure that there is no government interference in its governance and/or administration for cricket respectively," ICC said in a statement.
The ICC funding to Zimbabwe will be suspended and the country will be barred from participating at ICC events, putting their participation in the T20 world cup Qualifier in jeopardy.
The ICC has directed that the elected Zimbabwe Cricket board be reinstated to the office within three months, and progress in this respect will be considered again at the October Board meeting.
"We do not decide to suspend a Member lightly, but we must keep our sport free from political interference. What has happened in Zimbabwe is a serious breach of the ICC Constitution and we cannot allow it to continue unchecked. ICC wants cricket to continue in Zimbabwe as per the ICC Constitution," said ICC Chairman Shashank Manohar.